१०० पल डीन्ड्रियाका साथ फोटोग्राफी १०१ | Martech Zone
मसँग काम गर्दा पावल डी अन्ड्रिया र मैले भेट्यौं ExactTarget। धेरै प्रतिभाशाली विकासकर्ताहरू जस्तै, पावलसँग एक रचनात्मक, कलात्मक पक्ष पनि छ। उसको उत्कटता छ फोटोग्राफी। मध्येको एउटा एक स्थानीय कब्रिस्तानमा कोयोटको पल्टिको फोटो यो महिनाको हो इन्डियानापोलिस मासिक पत्रिका.
पछिल्लो क्रिसमस, मेरो छोरो र मैले एउटा खरीद गर्यौं निकोन D40 एसएलआर डिजिटल क्यामेरा मेरी छोरी, केटी को लागी। केटीले फोटोग्राफीमा रुचि लिएका छन र हामी त्यसलाई अहिले लात हान्न चाहन्छौं। मेरो छोरा, बिलको साथ संगीत र संगीत उत्पादन, ठूला टिकट आइटमहरू पाउनको लागि केटी कहिल्यै एक थिएन। त्यसैले बिल र मैले यसलाई बनायौं केटी क्रिसमस र उनलाई कार्यहरूसँग सेट अप गर्नुहोस् - ब्याकप्याक, क्यामेरा, एक जोडी लेन्स, तिपाई ... तपाईं यसलाई नाम दिनुहुन्छ!
आज दिउँसो केटीको १th औं जन्मदिनको उपस्थिति थियो - उनी पल संग पहिलो फोटोग्राफी पाठ। उहाँ एक महान शिक्षक हुनुहुन्छ - धेरै धैर्यवान र असाधारण पूर्ण। एक १-वर्षीया जवान महिला राम्रो विद्यार्थी हुनसक्दैन, तर पावलले वास्तवमा उनको क्यामेरा र यसको क्षमताहरु को बारे मा बुझे।
सिटिंग पाठ पछि, पावल र केटी इण्डियानापोलिसमा स्मारक सर्कल वरिपरि हिंडे। त्यो दिन सुन्दर थियो। केटीले पावलको डो with्याइका साथ खिचेका फोटोहरू अत्यन्त रोमाञ्चक थिए। आजबाट मेरो मनपर्नेहरू यहाँ छन्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, जाँच गर्नुहोस् फ्लिकरमा पूर्ण सेट.
पावलले भने कि यो उनको केटीको मनपर्ने थियो। उनले केही रूखका हाँगाहरूमा स्मारक बनाउँछिन् जुनमा उनीहरूमा बत्तीहरू थिए:
म कुनै फोटोग्राफर हुँ, तर जब म निकनलाई उठाउँछु र शटहरू लिन्छु कुनै पनि यी जस्तो सुन्दर देखिदैन! केटीले केहि हप्तामा केहि थप फोटोहरू लिने छ र त्यसपछि पावलसँग अर्को पाठमा गएर उनीहरूलाई समीक्षा गर्न र केहि अधिक जान्न।
यदि तपाईं इन्डियानापोलिस वरपर बस्नुहुन्छ र तपाईंको डिजिटल एसएलआर क्यामेराबाट अधिक लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् पावललाई केहि पाठका लागि बोलाऊ!
टैग: भौगोलिक अभियानभौगोलिक मोबाइलभूगोलमोबाइल WordPressसामाजिक मिडिया मार्केटिङThunderboltमौसम लक्ष्यीकरणWordPress मोबाइल प्लगइनwptouchwptouch समर्थक
मई 5, 2008 मा 4: 38 PM
राम्रा फोटोहरु। राम्रो प्रदर्शनहरू र मलाई फ्रेम गरिएको स्मारक धेरै मनपर्‍यो।
पॉल डी अन्ड्रिया
मई 5, 2008 मा 7: 43 PM
पोष्टका लागि धन्यबाद, डग। म तिमी मान्छे संग एक धेरै राम्रो समय थियो; र हामी राम्रो मौसमको लागि सोध्न सक्दैनौं। (सायद केहि फुले बादलहरू राम्रो हुने थियो। सफा निलो आकाशले अक्सर बोरिंगड्रप बोरिंगको लागि बनाउँदछ। 🙂
मई 6, 2008 मा 3: 34 PM
ठूलो उपहार; तपाईको भविष्य जस्तो देखिन्छ "एन्सेलेट”तपाईंको हातमा। 🙂
तर नराम्रो महसुस नगर्नुहोस्, आफ्नै D40 को साथ मेरो पहिलो तस्बिरहरू केवल भयful्कर थियो। यो एक उत्कृष्ट क्यामेरा हो तर यसले फोटोग्राफर सिक्नको लागि वास्तविक प्रतिबद्धता लिन्छ यसले यसबाट राम्रो चित्रहरू कोक्स गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, तपाईंको छोरीले पावलको सहयोगको साथ स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ।
पछिल्लो बर्षमा मैले मेरो D40 लाई रमाईलो गरें (फ्लिकरमा मेरो तस्वीरहरू) र सिकेको टोनबाट एट्लान्टा फोटोग्राफी भेट, जो महान भएको छ। यो कति राम्रो छ भनेर निश्चित छैन, तर तपाईंले उनलाई इन्डियानापोलिस फोटोग्राफी बैठकमा लैजानु पर्छ र प्रयास गर्नुहोस्।
PS सावधान रहनुहोस्, यद्यपि उनी वास्तवमै फोटोग्राफीमा छिर्छिन् भने उनले D40 बढ्ता प्रगति गर्न सक्छिन् र धेरै will १००० + लेन्सका साथ पूर्ण निकोन मोडेलमा जानको लागि यो समय आउँनेछ। र तपाई पक्कै पनि उसलाई पछाडि राख्न चाहानु हुन्न, अब हुन्छ?
हे; यसो नभन कि मैले तिमीलाई चेतावनी दिएन। 😉
मई 6, 2008 मा 7: 08 PM
केटी सधैं एक महान नेता, आयोजक र कलाकार भएको छ। मैले यो पहिलेदेखि नै महसुस गरें! हामी उनलाई चाँडै नै निकोन एसबी 600०० फ्ल्यास लिन गइरहेका छौं ... र म पक्का छु कि लेन्सहरू अर्को छन्। पावलले उनको जूम लेन्समा एक हेराइ साझा गरे जसमा मिलाउने अन्त्य गर्न आन्तरिक gyro छ ... वाह!
हामी अवश्य भेटघाट जाँच गर्नेछौं - लिंकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
मेरो छोरा एक संगीतकार हो, त्यसैले म केही समयको लागि सडकमा गइरहेको छु रुचिमा आवश्यक पर्ने लगानीमा! यद्यपि मलाई विश्वास छ कि यसले उनीहरूलाई विश्वास निर्माण गर्न र रचनात्मक आउटलेट प्रदान गर्दछ जुन स्कूलले कहिलेकाँही गर्दैन।